Suavecito Oil Based Pomade | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Hair Styling Products › Suavecito - Oil Based Pomade
Suavecito - Oil Based Pomade
Regular price MMK 29,000
Single - MMK 29,000 MMK3Pack - MMK 85,000 MMK
--High Hold | High Shine | Classic Oil Based Pomade--
ဆံပင်ထူသူများ၊ ဆံသားခြောက်သွေ့သူတို့နှင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမြဲလိမ်းပေးထားတတ်သူတို့အတွက် တာရှည်ခံခေါင်းလိမ်းဆီ။ ဆံပင်ကို တောင့်ခဲသွားစေခြင်းမရှိ၊ အချိန်မရွေးဆံပင်ပုံစံပြောင်းနိုင်စေကာ ထိန်းအားကောင်းကောင်း High Hold၊ ဆံပင်တောက်ပြောင်စေမှုကောင်းကောင်း High Shine နှင့် ချောချောမွေ့မွေ့ပုံသွင်းနိုင်စေပြီး၊ ချွေးဒဏ်၊ ရေဒဏ်ကိုလည်းခံနိုင်မည့်...
Suavecito - Oil Based Pomade သည် ကမ္ဘာကျော် လူကြိုက်အများဆုံး အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Suavecito - USA မှ ကျနော်တို့ရဲ့ ဘိုးဘေးများလက်ထက်မှစပြီး ခေတ်အဆက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ ဂန္တဝင် Oil Based Pomade အမျိုးအစား Classic ခေါင်းလိမ်းဆီကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Suavecito ၏ မူလ Original ရနံ့ပါဝင်ပြီး၊ Oil-Based ဖြစ်သည့်အတွက် ခေါင်းလျှော်ရာတွင် Build Up အဆီကျန်ခဲ့စေခြင်းကြောင့် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လိမ်းရာတွင်ခေါင်းလိမ်းဆီအကုန်သက်သာစေကာ အလွန်သေသပ်လှပသော ဗူးဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များအသုံးပြုနေကြသော ခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါသည်။
လှပသေသပ်သော Classic ဗူးဒီဇိုင်း
ထိန်းအားကောင်းကောင်း High Hold
ဆံသားတောက်ပြောင်စေမှုကောင်းကောင်း High Shine
Suavecito’s Oil Based Pomade for those who wantaworkable, but long-lasting hold withatraditional feel. Three ingredients of high performace are expertly blended together to createapomade that will help you achieve any style - fromasmooth, sleek slickback toasky-high pomp. This Oil Based Pomade providesahealthy shine andacontrolled hold on even the thickest, most unruly locks. It stays true to Suavecito's own tradition and kept the original Suavecito fragrance.
Collectible Classic Tin
Long Lasting High Hold
Suavecito - Matte Pomade
From MMK 39,000